दशैँमा बालबालिकाका अभिभावकहरुका लागि रामबाण उपाय - ज्ञानविज्ञान
पौष्टिक खानेकुरा र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले दशैं बालबालिकाका लागि महत्वपूर्ण चाड हो । दशैंमा बालबालिकाले लामो छुट्टी पाउँछन् । मिठो खान, राम्रो लगाउन र नयाँ ठाउँ घुम्न पाउने हुनाले उनीहरू निकै खुसी हुन्छन् । पिङ खेल्न पाउने तथा दक्षिणा स्वरूप पैसा पनि पाउने हुनाले तिनीहरू झन् उत्साहित हुन्छन् ।
यहि खुसी र उत्साहमा बालबालिकाले आफ्नो बारेमा ख्याल गर्दैनन् भने परिवार पनि साविक भन्दा व्यस्त हुने हुनाले आफ्ना बालबालिकाहरुको ख्याल गर्न भ्याउँदैनन् । यस्तोमा बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्छ ।
यसैले यहाँ हामी तपाईहरुलाई दशैँ तिहार जस्ता चाडपर्वमा बालबालिकालाई के खुवाउँने वा खान नदिने भन्ने कुराहरुको जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
दशैंका लागि भनेर जतिसुकै विपन्न वर्गका व्यक्तिको घरमा पनि चिउरा, मासु, चिल्लो पदार्थको जोहो गरिएकै हुन्छ । अर्थात् अन्य बेलाभन्दा दशैंमा खानाको परिकार भिन्न हुन्छ । तर, वयस्कहरूका लागि स्वादिलो हुने तरिकाले घिउ, तेल, मरमसला हाली पकाएका खानेकुरा बच्चालाई दिनु हुँदैन । रहलपहल बासी खानेकुरा पनि दिनु हुँदैन । मद्यपानबाट त उनीहरूलाई नितान्त टाढा राख्नुपर्दछ ।
उनीहरूलाई दिइने मासु कमलो, उसिनेको तथा कम मरमसला भएको हुनुपर्छ । खाद्यान्नका हकमा पनि चिउराभन्दा भात दिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
दशैंमा पिङ खोल्ने र चङ्गा उडाउने परम्परा निकै अगाडिदेखिको हो । तर, चङ्गा उडाउने क्रममा सावधानी नअपनाएइको खण्डमा यदाकदा अप्रत्यासित रूपमा जोखिमपूर्ण दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । पिङ खेल्ने तथा चङ्गा उडाउने क्रममा अप्रत्यासित दुर्घटना हुन गई बालबालिकाको ज्यान जाने तथा अङ्गभङ्ग भएका घटना हामीले देखे–भोगेकै हौँ । त्यसैले अभिभावकको निगरानीमा मात्र बच्चालाई यी कार्य गर्न दिनुपर्छ ।
नयाँ कपडा तथा दक्षिणा स्वरुप दिने पैसाले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । किनभने बच्चाहरूमा आफ्ना साथीभाइसँग दाँज्ने तथा प्रतिस्पर्धा गर्ने मनसाय हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई आर्थिक अवस्था अनुसार नयाँ कपडा किनिदिनुपर्छ । बरु अवस्था हेरी बच्चालाई कसैको नक्कल गर्नु, दाँज्नु, प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा आफूसँग भएको कुरामा सन्तुष्ट हुनुपर्छ भनेर सम्झाउनुपर्छ ।
लामो बिदामा बच्चालाई आफ्नो फुर्सद हेरी नजिकका देवी–देवता भएका तथा पर्यटकीय ठाउँमा घुमाउन लैजानु उपयुक्त हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरूमा नयाँ–नयाँ कुरा सिक्ने क्षमता विकास हुन्छ । विशेष गरी फूलपातीपछि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म सार्वजनिक यातायातमा व्यापक घुइँचो हुने हुनाले यात्रा गर्दा बालबालिकालाई सजिलो हुने कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ । जस्तै, यात्रा लामो छ भने बस्ने सिट, खानेकुरा, पानीको बन्दोबस्त तथा गाडी रोक्दा पिसाब गराउने आदि गुर्नपर्दछ । नजिकको ठाउँ छ भने हिँड्नु पनि स्वास्थ्यका दृष्टिले राम्रो हो ।
दशैंको लामो बिदामा स्कुलबाट धेरै गृहकार्य दिएको हुनसक्छ । दशैंको रमझममा मात्र रह्यो भने पछि स्कुल खुल्ने बित्तिकै गृहकार्य नसकेका कारण बच्चाहरू स्कुल जान मान्दैनन् । अतः फूलपाती अगाडि नै गृहकार्य के–कति छ, त्यही अनुसार दिनदिनै अलिअलि गरी गराउनुपर्छ । गृहकार्य छैन भने पनि घरमा अलिअलि पढाउनुपर्छ । अभिभावकलाई दशैंका समयमा भ्याइनभ्याई भए पनि उनीहरूले आफ्ना बच्चाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
Don't Miss it तरकारी र दालका रुपमा मात्रै होइन चना खाने तरिका, यस्ता छन् कायापलट गर्ने अरु तरिकाहरु
Up Next हरेक बिहान खाली पेटमा कागती पानी पिउँदा यसरी फेरिन्छ शरिर, आजै सुरु गर्नुहोस्
बालबालिकाको कहिलेकाहीँ बिना कारण पनि पेट दुख्छ ? किन
जुका पर्दा, सानो आन्द्रामा समस्या हँदा वा एपेण्डिक्स सुन्निँदा नाइटो वरिपरि दुख्छ । मुत्र नलीमा पत्थरी हुँदा वा एपेण्डिस सुन्निँदा…
च्याउको सेवन बाट बच्न सकिन्छ डिप्रेसनबाट
बेलायतस्थित इम्पिरियल कलेज अफ लन्डनका अनुसन्धाताद्वारा गरिएको यो अनुसन्धान ‘साइन्टिफिक रिपोर्ट’ मा प्रकाशित छ । सिलोकाइबिन च्याउ उदासी रोग (डिप्रेसन)…
बेसनको प्रयोग गर्नुका फाइदा, यस्ता छन्
१. सुख्खा छालाका लागि बेसनमा दूध, मह र एक चिम्टी बेसार मिलाएर पेष्ट बनाई त्वचामा लगाउनाले त्वचा नरम हुन्छ । २. त्यसैगरी…